Degmada Aadan Yabaal oo xaalado bini’aadanimo laga soo sheegayo“Dhageyso” | Baydhabo Online
Degmada Aadan Yabaal oo xaalado bini’aadanimo laga soo sheegayo“Dhageyso”
Ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeelaha dhexe oo dhawaan si buuxdo ula wareegay guud ahaan degmada Aadan Yabaal ayaa codsaday in gurmad loo fidiyo dadka ku dhaqan magaaladasi, iyagoo xusay in howlgallo ay sameeyeen ay ku dileen saddex ka tirsan Al-Shabaab, midna gacanta lagu dhigay.
Gaashaanle dhexe Yuusuf Cali Caadle oo ka tirsna guutada shanaad ee ciidanka Xoogga dalak Soomaaliyeed, isla markaana la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen guud ahaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe, isla markaana uu iminka ku suganyahay ceelkii ay qarxiyeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Gaashaanle Dhexe Yuusuf ayaa ka codsaday madaxda sare ee dowladda inay gurmad la soo gaaraan dadka ku nool degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaasi oo ay ciidamada ka sifeeyeen haraadiga Al-Shabaab.
Yuusuf Cali Caadle ayaa xusay in ciidamada ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah haraadiga Al-Shabaab, si guud ahaan gobolka Shabeelaha dhexe looga xoreyn lahaa nabad diidka Al-Shabaab.
Halkan ka dhageyso wareysiga Gaashaanle dhexe Yuusuf Cali Caadle